Sandesh Prabhahश्रीमान-श्रीमती बीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवन आनन्दित बनाउन यौनको भूमिका कति ? Sandesh Prabhah
श्रीमान-श्रीमती बीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवन आनन्दित बनाउन यौनको भूमिका कति ?
मंगलवार १० चैत्र, २०७७
एजेन्सी- यौनविना संरचनाको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसले व्यक्तिगत सम्बन्धलाई बलियो मात्र पार्दैन तर अझ यसले एक अर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध र जिवनकाल आनन्दित बनाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध मात्रै होइन यसले दुई जनाबीचको समझदारी र सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने काम गर्छ । जसले गर्दा खुशिले भरिएको जीवन विताउन पनि मद्दत मिल्दछ ।
हालै गरिएको एक अध्ययनमा जोडिकाबीच इन्टिमेसीको अध्ययन गरियो र त्यसमा देखिएको निकै नतिजाले आश्चर्यमा परिणामा देखाएको छ । आर्काइभ्स अफ सेक्शुअल बिहेवियरमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार, एक जना विवाहित जोडीलाई वर्षमा ५१ पटक यौन सम्बन्ध राख्नु पर्ने देखाएको छ । यसको मतलव हप्तामा एक दिन अनिवार्य सेक्स गर्नु राम्रो बताइएको छ ।
सन् २००० र २००४ को बिचमा भएको एक अध्ययनले विवाह भइसकेका जोडीहरुमा पहिलेको तुलनामा यौन सम्बन्ध राख्नुमाा कमी आएको देखाएको छ । वर्षे पिच्छे यौन सम्बन्ध राख्ने जोडीको संख्यामा कमि हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको हो । लगभग दुई दशक पहिलेको तथ्यांकको तुलनामा जोडिहरु अब ९ गुना कम यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका अध्ययनले देखाएको छ ।
जर्नल अफ सोशल साइकोालोजिकल ऐन्ड पर्सनेलिटी साइन्समा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार जो कपल सातामा एक पटक यौन सम्पर्क गर्छन्, उनी ती कपलको तुलनामा बढि खुशी हुने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
शिकागो विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको अध्ययन द सोशल अर्गनाइजेशन अफ सेक्शुएलिटीः सेक्शुअल प्रैक्टिसेजÞ इन द यूनाइटेड स्टेट्स’ मा पनि निष्कर्ष निकालिएको छ की, लगभग एक तिहाई जोडी हफ्तामा दुईदेखि तीन पटक सम्म सेक्स गर्छन्, जबकी केहि जोडीले भने महिनामा एक वा दुई अथवा तिन पटक मात्र सेक्स गर्ने गर्छन् ।
पोष्ट अवलोकन : 151